Dagaal Beeleed Ka Dhacay Hiiraan Oo Sababay Dhimasho Iyo Farabadan * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Baledweyne, Mareeg.com: Dagaal beeleed salka ku haya muran dhul ayaa saaka ka qarxay deegaan dhaca gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya.
Siddeed qof ayaa ku dhimatay, 20 kalena waa ay ku dhaawacantay dagaal beeleed maanta oo Khamiis ah ka qarxay deegaanka Kabxanleey ee gobolka Hiiraan.
Shuuriye Xuseen Xaayow oo ka tirsan waxgaradka gobolka Hiiraan ayaa xaqiijiyay jiritaanka dagaalka, wuxuuna sheegay in dadka ku dhaawacmay loo qaaday isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne.
Beelaha ay dirirtu u dhaxeyso oo isku haysta lahaanshaha dhul-beereed ayaa horraantii bishii la soo dhaafay gaaray heshiis xabbad-joojin ah.
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdi Faarax Laqanyo ayaa cambaareeyay dagaalka dib uga qarxay deegaanka Kabxanley.
Tulada Kabxanleey waxa ay 25 km waqooyi-galbeed ka xigtaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
abdulkadir says 8 years ago
Xaqdaradii aad umada ka gasheen ayaa hada leeydiinka gudayaa.
yusuf says 8 years ago
Kaabo qabiil aaqiro wax kuuma taro, ee qabii waa quran ee ka fogaada,
ALLAH, Ka baq oo aaqiro ha ku iib sanina aduunkaan dufoobey
shafi says 8 years ago
Asc. Walaalayaal waxaan indiik abyayaa ilaahay in uu xaqa idintuso ee dagaalka joojiya wax ku dhimanayaa waa soomaali ee dagaalka joojiya oo hadal wax ha lagu raadsho waar dagaalka joojiya oo maatada fiiriyo oo ilaahay ka baqa. Asc nabad ku noolaada inshalaa